Somaliland: Khilaafka Xukuumadda Iyo Xisbigeeda Oo Dibadda Usoo Baxay. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Khilaafka Xukuumadda Iyo Xisbigeeda Oo Dibadda Usoo Baxay.
Fadeexaddii Sawirka Muuse + Libbintii Siilaanyo + Xaqiraadii Gaafaadhi Iyo Is-gamaarintii Maxamuud Xaashi
Todobaadkan, ayaa markii ugu horreysay, waxa si aan caad lahayn usoo ifbaxay ifafaaleyaal hor leh oo iftiiminaya inuu khilaaf ka dhex jiro qasriga uu degen yahay hoggaamiyaha Qaranku Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo hoggaanka Xisbiga KULMIYE ee uu Gudoomiyaha u yahay Muj. Muuse Biixi Cabdi, kaddib markii in muddo ah-ba ay kusoo noq-noqonaayeen faggaarayaasha Siyaasadda, marfeshyadda iyo goobaha kalee Bulshaddu ku kulanto inta-ba Warar iyo xoggo tilmaamaya in khilaaf siyaasi u dhexeeyo Madaxtooyadda iyo Hoggaanka Xisbiga.
Haddaba, muddo kaddib daliilka ama dillada khilaafka hadal-hayntiisu soo jiitamaysey, waxa uu si aan mad-madow ku jirin usoo shaac-baxay horraantii Todobaadkan, kaddib markii Afhayeenka Xisbiga tallada haya Md. Xasan Gaafaadhi uu si toos ah u duray qasriga Madaxtooyadda ee uu degen yahay Madaxweynaha Qaranku, isla markaana isagoo bartilmaameed ka dhiganaya Buugg, sida uu sheegay ka Waramaya wax-qabadka Xukuumada uu gadh-wadeenka u yahay Madaxweyne Axmed Siilaanyo.
Buuggaas oo lagu faafiyey qaar kamid ah barraha Bulshada, ayaa sida Afhayeenku ku dooday dhinac kamid ah da’haadhka ama Jeldigiisa sare ee Buugga, waxa lagu dhejiyey Sawirka Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, kaasoo Afhayeenku sheegay in aanu Xisbiga KULMIYE taladiisa iyo diyaarintiisa-ba wax shaqo ah ku lahayn. Sida darteedna Md. Xasan Gaafaadhi waxa uu Xisbiga ka bari-yeelay ujeedada ka danbeysay in sawirka Gudoomiyaha KULMIYE lagu dhajiyo Buug xambaarsan macluumaad aanu wax shaqo ah ku lahayn Muuse Biixi, waxana, Afhayeenku tilmaamay in daabacaadda Buugaa ay lahaayeen dad dano gaar ah ka leh.
Afhayeenka oo arrimahan ka hadlaaya waxa uu yidhi, “..Beryahan waxa baraha bulshada lagu arkaayey Buug tilmaamaya waxqabadka Xukuumadda, oo galkiisa sare uu Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi ku yaalo. Buugaa waxqabadka waxa soo saaritiisa iska leh Xukuumadda, shaqo Xisbigu ku leeyahayna ma jirto, waxana hoggaamiye ka ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Siilaanyo iyo adeegayaashiisa u qaabilsan fulinta. Intaanu ka ognahay waxa buugga Daabacaadiisa lahaa cid dano gaar ah ka leh, waxa allaale iyo wax xisbigu shaqo ah oo uu ku leeyahayna ma aanay jirin..”.
Hadalkan cumladeysan ee kasoo yeedhay Afhayeenka KULMIYE Md. Gaafaadhi marka siyaasiyan loo qiimeeyo hadalkiisa, kol waxa uu ina tusayaa Musharrax Muuse Biixi iyo Xisbigiisu in aanay ku faraxsanayn dhaq-dhaqaaqyada ka socda qasriga Madaxtooyadda, kolna waxa arrintani sheegeysaa inaanu jirin xidhiidh wada-shaqayneed oo fayo qaba oo ka dhexeeya Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo iyo xisbiga Gudoomiye Muuuse Biixi ee KULMIYE.
Teeda kale, arrinkani waxa uu si dadban uga turjumayaa arrimo dhawr ah oo beryahaaba hadal hayntoodu bulshada ku dhex wareegaysay, kuwaasoo aynu ka xusi karno qaabkii Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE ku helay Musharraxnimada Xisbiga, taasoo sida dadka qaarkii ku doodo ahayd arrin aanu raali ku ahayn Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, hase-yeeshee ku timi rabitaanka iyo raali gelinta cid gaar ah oo saameyn weyn ku leh Madaxweynaha.
Waxa kaloo iyana dadka qaarkii qabaan in arrimahani markhaati fur u yihiin kala foggaansho soo jireen ah oo ka dhexeeya Madaxweyne Siilaanyo iyo Muuse Biixi, tan iyo intii ay rafiiqa noqdeen, waxa iyana xusid mudan oo dadka qaarkii dhacdadan u nisbaynayaan inay arrintani tahay mid ku lugleh, kuna kooban is afgaranwaa hadda uu dhexeeya Wasiirka Madaxtooyadda Md. Maxamuud Xaashi iyo Gudoomiyaha Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi, kuwaasoo intii ka danbeysay kalfadhigii shannaad ee golaha dhexe ee Xisiga KULMIYE aan isku sanba’naanayn, kaddib markii ay ku heshiin waayeen saami qabsiga Xisbiga KULMIYE.
Somaliland: Cali Khaliif oo Dhaqdhaqaaq Ciidan ka Bilaabay Degmada Widh-widh